तेक्वान्दो अब तानाशाही पाराले चल्दैन : जोशी « Nepali Digital Newspaper
तेक्वान्दो अब तानाशाही पाराले चल्दैन : जोशी
१४ पुष २०७७, मंगलवार १६:५६
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गठित विवाद समस्या समाधान तथा सहजिकरण समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला)ले ७ दिनको समयसीमा दिएर विवादित सङ्घहरूलाई पत्राचार गरेपछि अहिले खेलकुदमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । ज्वालाले सर्वप्रथम सहमति गरेर एकै ठाउँमा ल्याउँछु, मिल्ने भए मिलाउँछु, नमिल्ने भए ऐनबमोजिम नयाँ संरचना निर्माण गरेर जान्छु भनेपछि ती विवादित सङ्घमा नयाँ चेहराको आगमन हुने प्रवल सम्भावना बढेको छ ।
संयोजकको यस्तो कथनसँगै विवादित सङ्घमध्यको एक नेपाल तेक्वान्दो सङ्घमा प्रदीप जोशी (टेकराज)को चर्चा चलेको छ । विगतमा तेक्वान्दो सङ्घको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत निभाइसकेका जोशीको चर्चा तेक्वान्दोमा चलेपछि अहिले तेक्वान्दो खेलाडी तथा पदाधिकारीहरूमा नौलो रक्तसञ्चार भएको बुझिएको छ । स्वच्छ छवीका जोशीको आगमनले तेक्वान्दो विवाद सदाको लागि समाप्त हुने यतिबेला विश्वास गरिन थालेको छ । जोशी नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका संस्थापक सदस्य, विश्वविद्यालय खेलकुद सङ्घका अध्यक्ष, वर्ल्ड युनिभर्सिटी तेक्वान्दोका उपाध्यक्ष, खेलविज्ञ तथा नेका महासमितिका सदस्य हुन् । तेक्वान्दो सङ्घको अध्यक्षमा जोशीको चर्चा चलेपछि उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
० राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन-२०७७ अनुसार एक खेलको लागि एउटा मात्रै खेल सङ्घ गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा अहिले दुईवटा तेक्वान्दो सङ्घ अस्तित्वमा छन्, अबको समाधानको उपाय के हो ?
– सर्वप्रथम खेलकुद ऐनमा जुन कुरा व्यवस्था गरिएको छ त्यसैलाई अनुशरण गर्ने हो । ऐनअनुसार यतिबेला दुवै तेक्वान्दो सङ्घ खारेज भैसकेका छन् । त्यसैले खेलकुद मन्त्रालयले अहिले विवाद समाधानको लागि समिति पनि गठन गरेको छ । उक्त समितिले विवाद मिलाउन विवादित सङ्घमा पत्राचार गरिसकेको छ । यस्तो अब स्थामा अब उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
० दुवै तेक्वान्दो सङ्घ मिलेर आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ, नमिल्दाको विकल्प के हुन सक्छ ?
– मिलेर जानुको भन्दा अर्को विकल्प नै म देख्दिनँ । अब तेक्वान्दो पहिलेजस्तो तानाशाही पाराले चल्दैन । यदि कसैले यस्तो सोच बनाएको छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्रै हो । त्यसैले अरुको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्दै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनकि ऐनमा यो कुरा प्रस्ट रूपमा उल्लेखित छ । त्यसैले सर्वप्रथम कसरी मिलेर जान सकिन्छ त्यो वातावरण तयार पार्ने हो, मिल्न सकेन भने समितिले जे निर्णय गर्छ र निर्देशन दिन्छ त्यसैअनुरुप अगाडि बढ्ने हो ।
० तपाईंको नाम अहिले तेक्वान्दो सङ्घको अध्यक्षको रूपमा चर्चामा छ, के भन्नुहुन्छ ?
– म नेपाल तेक्वान्दो सङ्घको संस्थापक सदस्यमध्यको एक हुँ, मेरो नाम अध्यक्षमा जोडेर आउनु कुनै नौलो कुरा होइन । यहाँ तेक्वान्दोसँग साइनो नै नभएका व्यक्तिले हालिमुहाली गरिरहेका छन्, जसको कुनै पनि कोणबाट मसँग तुलना हुन सक्तैन । देश, काल, परिस्थितिअनुसार मेरो नामको चर्चा हुनुस्वभाविकै ठानेको छु ।
० तेक्वान्दो विवादको कुरो मिलिसक्यो भन्छन्, तपाईंलाई यो कुरोको जानकारी छ ?
– तपाईंले सुन्नुभएको खबर सही हो, यतिबेला तेक्वान्दो सङ्घका एकजनाबाहेक सबै पदाधिकारी सकारात्मक छन् । उनीहरू तेक्वान्दो समग्र विकास र विस्तारको लागि त्याग गर्न तयार छन् । तर एउटा व्यक्ति जसले अहिले पनि मिलेर जाने कुरामा हलो अड्काइरहेको छ । जसले गर्दा तेक्वान्दो विवाद हल हुन सकेको छैन । यसलाई मैले वर्षौंदेखि रजाइँ गर्दै आएको ठाउँमा अरु कसैले धावा बोलेपछि कस्तो सन्त्रासको स्थिति हुन्छ त्यसरी हेरेको छु, र यो तेक्वान्दोको लागि हितकर छैन । संस्थालाई व्यक्तिविशेषले नभइ नियमसंगत संस्थागत र रूपमा चलाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
० एकजनाले नमान्दा के हुन्छ त ? त्यसलाई पाखा लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने अबस्था छैन ?
– किन नहुनु ? अब ब्यक्तिले होइन, ऐनले पाखा लगाउँछ । तेक्वान्दोमा अब कुनै विवाद गर्न आवश्यक छैन, सबै ऐन अनुसार हुन्छ । त्यसपछि २१औँ शताब्दीको नयाँ सोच, नयाँ विचार र नयाँ भिजन भएको तेक्वान्दो हाँक्न सक्ने नयाँ पुस्ता आउँछ । त्यसले दशकौँदेखि तेक्वान्दोमा जरा गाड्दै आएका एकाधिकारवादी, सामन्ती सोच र संस्कार भएकालाई पाखा लगाउँदै खेल सङ्घलाई गतिशील बनाउनेछ ।
० यदि तपाई भविष्यमा तेक्वान्दो सङ्घको अध्यक्ष हुनुभयो भने सर्वप्रथम कुन कार्यलाई प्राथमिकता राख्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
– सर्वप्रथम म तेक्वान्दोको शुद्धिकरण गर्ने प्रयासमा लाग्नेछु । त्यसको लागि सुनपानी छर्किनेदेखि तेक्वान्दोको विकाससँग जोडिएका सबै कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नेछु । त्यसपछि विगतमा तेक्वान्दोमा आर्थिक क्रियाकलापअन्तर्गत भएका भ्रष्ट्राचारको छानविन गर्नेछु । सङ्घमा कब्जा जमाएर बसेका र अपारदर्शिता अपनाएका सबै कुरालाई बाहिर ल्याउने छु । साथै खेलकुदको साधन–स्रोत प्रयोग गर्ने, विकासको नाममा केही नगर्नेहरूको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नेछु ।
चौविस प्रमुख नेताहरूमध्ये सोह्र जनालाई संसदमा देख्न नपाइने !
विभिन्न पार्टीका मूख्य नेतामध्ये सम्भावित निर्वाचनमा अधिकाङ्श पराजित हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र
‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअनुरुप भारतले प्रदान गर्‍यो १० लाख भ्याक्सिन
भारत सरकारले नेपालको स्वास्थ्य सेवा तथा अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीहरूको तत्काल आवश्यकताको लागि नेपाललाई भारतमा उत्पादित १० लाख भाइल कोभिड-१९ भ्याक्सिन
श्रीलङ्काद्वारा पर्यटक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आगमनका लागि सम्पूर्ण सीमा खुला
श्रीलङ्काले पर्यटक र अन्तर्राष्ट्रिय आगमनको लागि आफ्ना सबै सिमानालाई बिहीबारदेखि पूर्ण रूपमा खोलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक तथा सीमा खुला
खेलकुद मन्त्रालय ‘कागजी बाघ’ मात्रै
सात जनाको राखेप कार्यसमिति तीन जनामै सीमित श्रीविक्रम भण्डारी ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन-२०७७’ लागु भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय
नेपालमै चिनिँदैन अर्थोडक्स चिया
सुत्केरीको उपचारमा लापर्वाहीका कारण प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य